Nabadoono iyo waxagarad ka soo horjeestay amarkii wasaraadaha arimaha gudaha
Iyadoo wasaarada arimaha gudaha ay sheegtay in aan magaalada Muqdisho aan lagu qaban karin shirar aysan ka warqabin dowladda KMG Soomaaliya ayaa arintaasi waxaa ka hadlay nabadoono iyo waxgarad Soomaaliyeed.
Nabadoon muumin C/raxmaan Fiidow oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka digay dhibaatooyin ka dhalan kara hadalkii ka soo yaaray wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka oo ku aadanaa in aan la qaban karin shirar aysan ka warqabin xukuumada KMG Soomaaliya iyadoo lagu guda jiro marxaladda kala-guurka magaalada Muqdishana ay ka soconayeen kulamo u badan kuwa lagu diidanyahay ansixinta qabyo qoraaleedka dastuurka.
Waxa uu sheegay in hadii dadka la caburiyo ay ka dhalan karta dhibaatooyin taasi oo uu xusay in masuuliyadeed ay qaadeyso cidii soo saartay amarka ku aadan in aan la qabin karin shirar aysan xukuumadu ka war qabin, waxaana uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay gumeysi ku jiraan sida uu hadalka u dhigay.
Nabadoon Muumin C/raxmaan Fiidow oo hadalkiisa sii watta ayaa sheegay in Dastuurka qabyo qoraaleedka ee la doonayo in la ansixiyo ay uu wato maamulka Puntland, isagoo sheegay in gudiga madaxa banaan ay ka soo jeedaan maamulka Puntaldn, Soomaalida kalana aysan wax shaqo ah ku laheyn sida uu hadalka u dhigay.
Hadalkaani ayaa imaanaya xili amar ka soo baxay wasaarada arimaha gudaha Xukuumada KMG Soomaaliya lagu sheegay in aan la qaban karin shir aysan ka warheyn xukuumada KMG Soomaaliya xili qaar ka mid ah hoteelada Muqdisho ay ka soconayeen shirar lagu diidanyahay qabyo qoraaleedka Dastuurka. HOME